Maxaa Shabaab u sahlay weerarada Degmada Afgooye? (Wax badan ka ogow) | Baydhabo Online
Maxaa Shabaab u sahlay weerarada Degmada Afgooye? (Wax badan ka ogow)
Dadka Somaliyeed, ayaa su’aalo ka keenay waxa maleeshiyada Ururka Al Shabaab u sahlay in ay weeraradan Degmada Afgooye ee Gobolka Shabellaha Hoose, ka dib markii ay afar jeer soo weerareen, tan iyo 18-kii bishii October.
Degmada Afgooye oo mid istiraatiiji ah, ayaa xiriirisa Gobolada Koonfur Galbeed iyo Bartamaha Somaliya, iyadoo 30km dhinaca koonfureed kaga beegan Magaalada Muqdisho.
Afgooye, ayaa waxaa soo gala wadooyinka waawayn oo halbowle u ah isu socodka dadka iyo ganacsiga. Qiyaastii illaa lix wado oo waawayn, ayaana si toos ah u soo gala.
Wadooyinka soo gala Afgooye, ayaa kala ah wadada ka timaada Magaalada Muqdisho ee aadda Magaalada Baydhabo. Wadada ka timaada dhinaca Xerada Laanta Buuro, wadada ka timaada Toora Toorow, wadada ka timaada dhinaca Awdheegle, Bariire, Sabiib iyo Janaale, ee Afgooye looga soo galo dhanka Buulo Fooliyo, wado kaloo ka timaada Leego iyo wadada ka timaada Degmada Balcad ee soo gasha Afgooye. Wadada jayga ee xiriirisa Balcad iyo Afgooye, ayay dadku u garanayan (Basra).
Waxaa intaasi dheer wadooyin fara-badan oo qardo-jeex oo dhex mara beeraha ku teedsan Degmada Afgooye. Sidoo kale Webiga Shabelle oo guray, ayaa sahlaya in si caadi ah la isaga kala tallaabo labada qaybood ee Afgooye u qaybsan tahay.
Iyadoo wadooyinka soo gala Degmada Afgooye ay kuwo furan yihiin, ayaa waxaa hadana jirin ciidan dowladeed oo si buuxda uga hawlgala inta badan wadooyinka soo gala degmadaasi.
Ciidamada Dowladda Somaliya iyo Xoogaga Nabad Ilaalinta Midowga Afrika, ayaa dhawaan dib uga soo baxay Janaale, Mubaarak, Awdheegle, Sabiib, Toora Toorow, Xerada Laanta Buuro iyo goobaha kale ee ku dhow dhow. Goobaha ay soo faarujiyeen labada ciidan, ayaa muhiim u ahaa suggida amniga Afgooye.
C/naasir Caalim Macalin Ibraahim, Gudoomiyaha Degmada Afgooye, ayaa sheegay dhulka ay soo faarujiyeen Ciidamada Dowladda iyo Amisom, in ay fududeysay weerarada soo noq noqday ee Al Shabaab.
Madaxa Arrimaha Bulshada ee Maamulka Gobolka Shabellaha Hoose, Cumar Maxamuud Cilmi (Cumar Carabey), ayaa qaba haddii labada ciidan dib ugu laaban lahaayen goobaha ay soo baneeyeen, in ay meesha ka bixi laheyd weerarada Shabaab.
Sarkaal ka tirsan Taliska Ciidanka Xoogga Dalka, ayaa sheegay in aanay Ciidanka Militariga Somaliya dib ugu laaban doonin dhulkaasi, illaa iyo inta joogto laga dhigayo mushaaraadka ciidamada.
Sarkaalkan oo codsaday inaanan magaciisa la soo xigan, ayaa Dhacdo.com u sheegay mushaaraadka la’aanta Ciidanka Militariga, in ay tahay caqabadda ugu wayn, ee ay uga soo baxeen deegaanadii ay horey uga qabsadeen Shaababka.
Waxaa uu intaa ku daray in Ciidanka Amisom ay isaga soo baxeen deegaanadaasi, ka dib markii ay arkayn buu yiri Ciidankii Xoogga Dalka oo ka guuraya.
Saraakiisha Militariga Somaliya, ayaa kuu sheegaya in muddo sideed bilood ihi aanay arag wax mushaaraad. Villa Somalia ayaa marar badan lagu eedeeyay in mushaaraadkii ciidamada u adeegsanayso arrimaha doorashooyinka.
Dadka reer Afgooye oo walaac xoogani ka muujiyay culeyska ay Shabaabku soo saareen degmadaasi, ayaa waxaa ay qaarkood bilaabeen in ay isaga barakacaan guryahooda. Suxufiyiinta ka hawlgala Afgooye, ayaa kuu xaqiijinaya in dadku bilaabeen in ay ka cararaan guryahooda.
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan Xildhibaanada Aqalka Hoose ee Baarlamaanka Somaliya, ayaa Dowladda Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku eedeeyay, inaanay daacad ka ahayn u adeegidda shacabka ku dhaqan Gobolka Shabellaha Hoose